Uffanni aadaa Oromoo eessaa garamitti...? - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright Abaaboo Asaffaa
Hamayyeessuu fi qulqullina hojiisaa dabalurratti malee uffanni Oromoon silayyuu dizaayina bareedaa hedduu qaba jetti ogeettiin uffataa Aaddee Abaaboo Asaffaa.
Abaaboon ijoollummaa eegaltee hojii kanarratti boba'uuf fedhii guddaa qabaattu illeen, waan barachuuf feetu maatiin dhowwamu ishee dubbatti.
Haata'u malee, waggoota hedduu booda fedhiifi kennaashee ganamaatti deebi'uun hojii uffataa dizaayiin gochuu jalqabuun hojjechaa jirti.
Aadde Abaaboon bara 1993 keessa biyyaa bahuun gara Awustraaliyaa kan deemte yoo ta'u, waagoota 25 darbaniif achuma magaalaa Melboorni keessa jiraattee jirti.
Turtii waggoota 14 booda gara biyyasheetti yeroo deebiiteetti ture fedhiin dizaayiniin huccuu inni bara ijoollummaarraa keessashee ture haaromuu kan dubbatu.
Kaka'umsi inni jalqabaa fedhii fi haawwii guddaa yeroo ijoollumma kiyyaarra jalqabe nakeessa buleedha jetti Abaaboon.
"Uffataafi mana babbareechuun baay'ee na gammachiisa. Akkuman sadarkaa lammaffaa xumureen barumsakoo kallattii barachu fedhe maatiinkoo naaf waan hinhayyamneefuu dhiisuuf dirqame".
Kennaan keessa namaa jiruu yeroo eeggata
Haata'u malee, kennaan keessa namaa jiru kammiiyuu yeroo eeggata malee osoo hin mullatiin hin hafu. Isa kennaa ofii sun hanga argatamuttis waanti biraan dheebu nama hinbaasu.
Kanaafuu yeroon gara biyyatti deebi'eetti waa'ee kennaan qabu kana yaadu eegale, jetti Abaaboon.
Kaka'umsi inni lammaffaan ammoo qabeenya uffata aadaa Oromoon qabu beekuudha. "Oromiyaan bal'oo akkuma taate gosa uffataa hedduu qabdi."
Image copyright Abaaboo Asaffaa Nagaasaa
Kara biroon ammoo sabni guddaan kun aadaa uffataatiin badhaadhaa ta'us, bakkaa fi haala barbaachisaa ta'een uummanni abbaan aadaa sanaa argataa waan hin jirreef hojii kana keessa galtee gumaachuu akka barbaaddu dubbatti Abaaboon.
"Kanneen hanga tokko hojjechuu jalqabanillee, xiyyeeffannaa cimaa utuu itti hinkenniin waan hojjetaniif kan saba guddaa kana madaalu hinturre. Bakkawwan uffannaaleen kun itti gurguramanis bakka caccaboo fi xixiqqoo waan turaniif haalli nama hawwatu hinturre," jechuun ibsiti.
Namni foyya'ee dhiyaateefi jennaan kan ofiisaatiin miidhaguu jaallata. Kanarraa ka'uun ture Abaaboonis hanga tokko fooyyeessuu fi hammayyeessuun dhiyessuu kan eegalte.
Bu'uura aadaa Oromoo osoo hin gadhiisin
Namoonni tokko tokko uffata aadaa Oromoo osoo hin jijjiiramu ta'ee yaada jedhu qabu. Sodaan ykn yaaddoon isaanii sirrii ta'uu mala. Garuu akka namatti tolutti tolfamuun barbaachisaadha.
Akka ejjennoo Abaabootti, aadummaan isaa osoo hin badiin miidhagaa fi hawwataa taasisuun ni danda'ama. Kun ammoo beekumsa, kennaa fi xiyyeeffanaan hojjechuu gaafata.
Uffata kana foyyeessuu fi ammayyeessuun hundee aadaa Oromoo osoo hin gadhiisiin ta'uu qaba kan jettu Abaaboon, karaa qorannootiin wantoota tokko itti dabaluun akka namatti tolu taasisanii dhiyeessuun gaarii ta'uu dubbatti.
Inni biroon ammoo uffanni aadaa keenya yeroo baay'ee yeroo ayyaanaa qofaaf ta'uun isaa hafee, akkamiin uffata yeroo maraa (guyyuu) uffatamu gochu akka danda'amu irratti hojjechuunis kaayyooshee keessa tokkodha.
Goodayyaa suuraa Uffanni aadaa Oromoo haala fooyya'aan dhihaachuun uffata yeroo maraa ta'uus ni danda'a
Jalqabarratti huccuu dubartootaa hojjechuu jalqabdus, yeroo gabaabaa keessatti kan dhiiraas hojjechuu akka eegalte dubbatti Abaaboon. "Uffata gaafan dizaayin godhu umurii hundaaf: ijoollee, shamarran, dardaraoota, namoota gayeeyyii hundi fayyadamoo akka ta'anittan hojjedha."
Wanta hojiishee adda godhan yeroo dubbattu, xiyyeeffanaan qulqullinaaf taasiftu akka ta'edha.
"Kaayyoon hojii kana ani jalqabeef galii ittiin argachuuf osoo hinta'iin, miidhaginaafi qulqullinaan hojjedhee dhiyeessuun sadarkaa uffata aadaa Oromoo hanga tokko ol kaasuun beekumtii akka horatu gochuudha," jetti.
Waanti hundi ogummaa barumsaan deggeramuu barbaada kan jettu Abaaboon, barumsi muuxannoo addunyaa kanarra jiru cuunfee kan namaa dhiheesuudha jetti. "Kanaafuu akka gaariitti waan hojjetan irratti qophaa'uun gudda barbaachisaadha."
Uffata aadaa Oromoo barnootaan deggeruu...
Abaaboon hanga ammaatti muuxannoo qofaan ogummaa gahaa utuu hinqabaatiin hojii kanaa hojjechaa jiraachuu dubbatti. "Fuulduratti hojii uffata aadaa Oromoo bal'inaafi baay'inaan hojjechuuf akkan danda'uutti yuunivarsiitii galeen xumuraa jira.
"Oggummaa faashiiniifi dizaayini akkasumas tartiiba geggeessa hojii kanarratti kan oggummaafi muuxanno naaf kennu Yuunvarsitii galee baradhee xumararra gaheen jira kan jettu Abaaboon, hojii kanaaf fedhi qofti gaha miti jetti.
Dizaayiniin industirii guddaadha, garuu akkasumaan hin dhufu. Waan ta'eefis murannoo qabaatanii dorgomaa ta'anii argamuudhaaf barumsaan deggeramuun heddu murteessadha.
Hojiii kana bal'inaan hojjechuuf meeshaa hedduutu barbaachisaa akka ta'an ni dubbatti ogeettiin kun. Kanaaf barumsashee xumuruun, meeshaalee barbaachisan adda baafachuun gara biyyaatti galchuun ballinaan hojjechuuf akka jirtu fedhashee ibsiti.
Shamarraniifi dargaggoota keenya warri kennaa akkanaa qaban akka milkaawaniif leenjii fi barnoota kennuf akka barbaaddu himti.
"Kanneen hojiirratti bobba'anii jiranis jajjabeessuu fi yaada kennuufiin bira dhaabbachuu fedhiin qaba.
Walumaagalatti, aadaa uffata keenyaa dagaagsuuf waan dandeettii kiyyaa hunda gochuudhaan uffanaa keenya addunyaarratti bal'inaan akka beekamuuf fedhiifi galma hojii kootiiti. Waaqayyoos ammoo naa milkeessa jedheen amana," jechuun haawwii qabdu ibsatte Abaaboon.